Na-adịghị mma SEO Ọrụ! | Martech Zone
Wenezde, August 8, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ihe karịrị otu afọ gara aga, edere m banyere ụlọ ọrụ SEA… Nchọgharị Injin Ọchụchọ. O nweghi mkparịta ụka jikọtara ya ruo oge mmelite algorithm kachasị ọhụrụ. A maara ya ugbu a dị ka SEO na-adịghị mma… Na Google nwere ike ịnọ na nnukwu nsogbu n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'ezie. Ndị folks na Tụrụ ụtọ efehe a ule ebe ha zụrụ ụyọkọ nke ogbenye njikọ… na ekemende ụgbọala ala ezubere iche na saịtị si ogo. Ndia bu nkowa banyere ihe omuma ha ha weputara:
Tags: adịghị mma seoOké osimirimgbu mmadu search enginesearch engine njikarịchaA
Otu esi achọta Styles CSS a na-ejighi na gị Stylesheet
Aug 8, 2012 na 6:40 PM
Dị Mfe, ọ́ bụghị ya?
Aug 10, 2012 na 2: 04 AM
SEO na-adịghị mma dị ebe ahụ ọbụna site na mmalite nke Google. Ma na algorithm na-adịbeghị anya gbanwere akụkụ ọjọọ nke SEO nwetara uru!
Aug 16, 2012 na 9:14 PM
aghọtaghị otú ọ dị mfe ndị mmadụ nwere ike ibibi saịtị saịtị… wow M na-eche ka ọtụtụ n'ime ndị asọmpi m mara nke a ma na-anwa imebi ọkwa nke onye ahịa m.
Aug 18, 2012 na 7:31 PM
Ọ bụ n'ezie nnukwu ohere ọzọ maka mmegbu, Chris!